Buy mi 4s (130,000Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
ရောင်းချသူ: Za Zaw
mi 4s လေးရောင်းမယ်. ဘူးပစ္စည်းစုံပါမယ်. 99% သန့်ပါသေးတယ်. ram 3gb . rom 64gb ပါ. battery လဲတော်တော်အသုံးခံပါတယ်. lcd မှာတော့ အလင်းသေးသေးလေးပေါက်ပါတယ်. no error ပါ. အလဲဆိုရင်လဲအဆင်ပြေမဲ့အလုံးဆိုရင်လဲပါမယ် .09450088227
အမည်: mi 4s